को हुन आइ.पि.एल खेल्न पाउन सक्ने नेपाली खेलाडी दिलबाहादुर ? | Hamro Khelkud
को हुन आइ.पि.एल खेल्न पाउन सक्ने नेपाली खेलाडी दिलबाहादुर ?
कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दा गर्दै डडेल्धुरा आलितालका दिलबहादुर बोहरा घरको आर्थिक स्थिती कमजोर भएकाले केही जागिरको खोजीमा भारतको पञ्जाव गए । पञ्जावमा पुगि काम गर्र्न सुूरु गरे निकै मेहनती र लगनशिल भएकाले उनका मालिकले उनीलाई कामसँगै पढाई अगाढी बढाउँन सुझाव दिए र आवश्यक सहयोग पनि गरे । काम र पढाईसँगसँगै अगाढी बढाईरहेका बेला उनलाई ईण्डियाको क्रिकेट कल्चरले तान्यो । उसो त उनी सानै देखि क्रिकेटमा औधी रुची राख्थे । आफ्नोे वरपर छरछिमेकका केटाहरु क्रिकेट किट लिएर विहान बेलुका क्रिकेट प्रशिक्षणमा गएको दृश्यले उनलाई लोभ्यायो र उनले क्रिकेट करिअर अगाढी बढाउँने सोचे ।
पञ्जाव प्रान्तले भारतको क्रिकेटमा सधै उच्च स्थान ओगटेको छ । झन बर्षेनी हुने आईपीएल प्रतियोगिताले त त्यहाँको माहोल नै वेग्लै हुन्थ्यो । उनीकाम गर्ने स्थान भन्दा केही घण्टाको दुरीमा रहेको अमृतसर स्थित गान्धी ग्राउण्ड थियो । उनले पनि त्यहाँ गएर क्रिकेट प्रशिक्षण लिन तथा नियमित अभ्यास गर्न थाले । प्रशिक्षण लिन थालेको केही समयमै उनको मेहनतले उनले आफ्ना गुरुहरुलाई प्रभावित पार्न सफल भईसकेका थिए । उनी अझै राम्रो गर्न सक्ने ठानेर उनका गुरुहरुले उनलाई दिल्लि प्रशिक्षणका लागि आज सुझाए । सुझावको अनुसरण गर्दै उनी पनि दिल्ली पुगे र कोटा मैदानमा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाएँ ।
दिल्लीमा प्रशिक्षण गरिरहेका बेला उनी ईण्डिया यु १९ टीमको १८ जनाको क्याम्पसमा पर्न सफल भए । जुन उनको खेल जिवनको सवैभन्दा ठुलो उपलब्धी थियो । एउटा नेपाली खेलाडी ईण्डिया यु १९ विश्वकप टीमको १८ जनाको सुचीमा पर्नु भनेको कम उपलब्धी थिएन । त्यो क्याम्प उन्मुक्त चन्दको कप्तानीमा रहेको भारतिय टीमका लागी थियो । पछि त्यसै टोलीले सन २०१२ को यु १९ विश्वकप पनि जित्यो । दुर्भाग्य उनी औलामा लागेको चोटका कारण अगाढी बढ्न सकेनन् र बन्नै लागेको ईतिहास रोकियो । उनलाई औलामा चोट लाग्नु नेपाल र उनका लागी निकै दुर्भाग्य बन्यो ।
औला फ्याक्चर भएपछि उनले केही समय क्रिकेट खेल्न सकेनन् । त्यतिवेला उनलाई भारतमा आफै कमाएर आफ्नो खर्च धान्नुपर्ने पनि परिवारका लागि पैसा पठाउँनु पर्ने थियो । त्यसैले केही समय क्रिकेटलाई बिट मार्दै उनी आर्थिक उपार्जन तिर लागे । उनी धनगढी फर्केपछि धनगढीका साथीहरु केशव सिंह, राजेश खत्री लगायतले उनलाई तपाई राम्रो क्रिकेट खेल्नुहुन्छ भन्दै आफ्नो टीमबाट खेल्न आग्रह गरे । त्यतिवेला केशब र राजेश एसपीए टीमका महत्वपुर्ण सदस्य थिए । उनीहरुको प्रस्ताव स्वीकार्दै दिलबहादुरले रोकिएको उनको क्रिकेट यात्रा पुनः सुरु गरे, राम्रो प्रदर्शन पनि गरे ।
उनले धनगढी बसाईका क्रममा निकै टुर्नामेन्टहरु खेलेर सवैलाई प्रभावित पारेका थिए । नेशनल प्रतियोगिताका लागि त्यतिवेला धनगढीमा सिनियर छनौट प्रतियोगितामा उनले पनि सहभागिता जनाए । दुई खेल खेल्न पाएका उनले एक खेलमा ५० रन बनाएर अविजित रहे तर अन्तिम सुचीमा पर्न सकेनन् । उनीभन्दा कम प्रदर्शन गर्नेहरु टीममा थिए तर सेलेक्टरले उनको प्रतिभा चिन्न सकेनन् र उनी टोलीमा अटाएनन् । उनको मन निकै खल्लो भयो, ईण्डिया यु १९ टीमको क्याम्पसम्म परिसकेका खेलाडीहरुलाई प्रदर्शन राम्रो हुँदा हुँदै पनि क्षेत्रिय प्रतियोगितामा पनि चान्स नदिएकाले उनको नेपालबाट खेल्ने सपनालाई तुषरापात भए जस्तै लाग्यो । मन खल्लो भएपनि उनले क्रिकेट छोडेनन् र डिसिएको भारतको सह्रानपुरमा भएको क्रिकेट टुरमा सहभागी भए । उनीसँगै डिसिएको टोली भारतको सह्रानपुर प्रतियोगिता खेल्न प्रस्थान गर्यो । त्यतिवेला आयोजकले नेपालबाट डिसिएलाई मात्र टुर्नामेन्टमा प्रवेश दिएको थियो भने बाकीं सम्पुर्ण टीमहरु भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट थिए । प्रतियोगितामा डिसिएले तेस्रो स्थान हात पार्यो उनको प्रदर्शन प्रभावशाली रह्यो ।
प्रतियोगिता सकि डिसिएको टोलीसँगै उनी धनगढी फर्किए । त्यसको केही दिनमा उनका साथीहरुले दिल्लीमा किंग्स ईलेवन पञ्जावको छनौट खेल भईरहेको जानकारी पाए र दिल्ली गएँ । छनौट खेलमा उनले ४२ बलमा ८४ रन र २ विकेट लिए जुन छनौट खेलको सवैभन्दा राम्रो प्रदर्शन थियो । उनको यो प्रदर्शनले छनौटकर्ताको आखाँमा उनी पर्न सफल रहे । छनौट खेल सम्पन्न भईसकेको केही दिनमा उनका नाममा एक पत्र आयो । पञ्जाव क्रिकेट एशोसियशनको नामबाट आएको उक्त पत्र उनका लागि आईपिल खेल्ने ढोका थियो । छनौट खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका कारण उनले पहिलो चरण पार गरिसकेको पत्रले स्पष्ट पार्यो अब दोस्रो चरणमा उनको फिटनेश टेष्टका लागि पत्र थियो । किंग्स ईल्यावेन पञ्जावले पत्र मार्फत उनलाई फिटनेश टेष्टका लागि बोलाईयो र उनी पञ्जाव गए । दुई दिनको फिटनेश क्याम्पमा पनि उनी सफल भए । यसले उनलाई आईपीएलमा खेल्न अझ नजिक पु¥यायो ।
फिटनेश चरण पार गरिसकेपछि अब किंग्स ईलेवन पञ्जावले उनलाई अन्तिम क्याम्पका लागि माहोली बोलाएको छ । पञ्जावका लागि मुख्य १६ जना अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरु चयन भईसकेका छन । त्यससँगसँगै टीमले रिजर्व खेलाडीका लागि अन्य १६ जनालाई खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत टीममा भित्र्याउने गर्दछ, उनले भने मेरो अन्तिम संघर्ष अब त्यही १६ जना भित्र पर्ने हो । आगामी मार्च ४ देखि १३ तारिखसम्म उक्त छनौट प्रतियोगिता छ । पत्रमा खेलिएको छ, क्याम्पमा पर्न सफल तपाई नेपालको पहिलो खेलाडी हुनुहुन्छ, तपाईलाई बधाई अनि शुभकामना । यदि म उक्त छनौट प्रतियोगितामा सफल हुन सके भने किंग्स ईलेवनको सदस्यका रुपमा रहनेछु । छनौट भने मात्र किंग्स ईलेवनले उनीसँग बार्षिक २५ लाख रुपैया सम्मको सम्झौता गर्नेछ भने अन्य ब्राण्डहरुले पनि उनलाई स्पोन्सर गर्नेछन ।
क्याम्पका लागि लेटर आउँनु मेरो जिवनको सवैभन्दा ठुलो उपलब्धी हो, उनले भने म लेटर पाईसकेपछि सिधै नेपाल आए । नेपालबाट खेल्ने मेरो पहिलो प्रयासमा म क्षेत्रिय प्रतियोगिताबाटै फालिय तर अहिले आईपिएलको क्याम्पसम्म परेको छु । म क्याम्प सम्म परेकाले नेपालमा पनि राम्रा खेल्ने प्लेयरहरु छन भन्ने त्यहाँका कोचहरुलाई लागेको छ । उनीहरु प्रभावित भएका छन । तर अझै पनि मेरो सपना नेपालबाटै खेल्नुछ । म अझै पनि नेपालबाटै खेल्ने प्रयास गर्नेछु, उनले भने ।